ရခိုင်မျှစ်စပ်ဟင်း easy cook | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Food, Drink & Recipes » ရခိုင်မျှစ်စပ်ဟင်း easy cook
ရခိုင်မျှစ်စပ်ဟင်း easy cook
Posted by weiwei on Sep 13, 2012 in Food, Drink & Recipes | 19 comments
wei's cook မျှစ်စပ်ဟင်း
မျှစ်ကို အစိမ်းအတိုင်း ငပိစိမ်းစားနဲ့ အစပ်ချက်စားလေ့ရှိတဲ့ ရခိုင်အကြိုက်ဟင်းတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ ဟင်းချက်နည်းကို အသေးစိတ်မရေးတော့ပဲ ဟင်းတစ်ခုအနေနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးချင်လို့ပါ။ မိုးရာသီမှာမှ ၀ယ်လို့ရတဲ့ မျှစ်အနုလေးတွေကို ပုဇွန်၊ ငရုတ်သီး၊ ငပိစိမ်းစားတို့နဲ့ ရခိုင်စတိုင် ခပ်စပ်စပ်ချက်တဲ့ဟင်းက မိုးရာသီနဲ့ အလွန်လိုက်ဖက်ပါတယ်။ မျှစ်အရသာကို ပကတိအတိုင်း ခံစားလို့ရတာမို့ မျှစ်ကြိုက်တဲ့သူတွေ ချက်စားလို့ရအောင် မိုးရာသီမကုန်ခင် ကြော်ငြာပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ် …
မျှစ်အစိမ်း (လှည်းတန်းဈေးမှာ ၀ယ်လို့ရတယ်)
အ၀ိုင်းသေးသေးလေးတွေလှီးပြီး ရေစိမ်ထားလိုက်ပါတယ်။ ကြက်သွန် အဖြူအနီ ပါးပါးလှီးပြီး ဆီသတ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ငရုတ်သီးအစိမ်းမှုန့်ထည့်တယ်။ ပုဇွန်ထည့်တယ်။ ရေဖျော်ထားတဲ့ရခိုင်ငပိစိမ်းစားနဲနဲထည့်တယ်။ စပ်ချင်လို့ ငရုတ်သီးစိမ်းကိုလဲ ထောင်းထည့်လိုက်ပါတယ်။ ခဏလောက် ပုဇွန်ကျက်အောင်လုပ်ပြီး မျှစ်တွေကိုထည့်ချက်ပါတယ်။ မျှစ်က အစိမ်းမို့လို့ နူးသွားအောင် ရေနဲနဲထည့်ပြီး အဖုံးပိတ်ကာ မိနစ် ၂၀ လောက် ချက်လိုက်ပါတယ်။ ကျက်လို့ မြည်းကြည့်တော့ သိပ်စပ်နေတာနဲ့ သကြားနဲနဲထည့်လိုက်တယ်။
ရခိုင်သူငယ်ချင်းကိုကျွေးချင်လို့ ချက်ထားတာပါ … သူကကြည့်ပြီး မဆိုးဘူးလို့ မှတ်ချက်ပေးတယ် … သူတို့တွေကတော့ အရည်နဲနဲကျန်အောင်ချက်တယ်တဲ့ … ရန်ကုန်ကမျှစ်က အရသာပိုပြင်းတယ်လို့ပြောတာပဲ …
မျှစ်ဆိုတာမျိုးဟာ အဆိပ်အတောက်များပေမယ့် သူ့ရာသီနဲ့သူ ခံတွင်းမြိန်စေတတ်တယ်။
တရုတ်တွေအဖို့တော့ မျှစ်မျိုးစုံ အစိုခြောက်တွေဟာ ဟင်းပွဲတွေမှာ အမြဲလိုထည့်တာပဲ…
ပထမဆုံးအကြိမ် ချက်ဖြစ်တာ … အဲဒီဟင်းအနံ့ရှူမိပြီး အလက်ဂျစ်ဖြစ်သွားတာ ဂိတ်ဆုံးအထိရောက်သွားလို့ ၂ ရက်တောင် ဖျားလိုက်ပါသေးတယ် … ငံပြာရည်နံ့၊ ငပိစိမ်းစားနဲ့၊ ငရုတ်သီးဆီသတ်နံ့တွေနဲ့ အလာဂျစ် ….
မျှစ်က စားလို့ကောင်းတာတော့ အမှန်ပဲ …
တရုတ်တွေ မျှစ်ကိုကြိုက်ကြပေမယ့် တရုတ်ပြည်ကမျှစ်တွေက မလတ်ဆတ်လို့ အရသာမရှိဘူး …
စားချင်စရာ ကောင်းလိုက်တာ.. မြှစ် ကို ၀ါးအစိမ်းက ချိုးတာ ချက်လို့ ရရင်တော့ အိမ်မှာ ၀ါးပင်တွေ ရှိတယ် အဲလို ချက်လို့ ရမယ် ထင်တယ်။ ၀ါးပင်တိုင်းကော ချက်စားလို့ ရပါ့မလား။ အိမ်က ၀ါးပင်က ရွှေဝါးတွေ.. ရတယ် ဆိုရင် အိမ်ရှေ့မှာ ပြေးချိုးပလိုက်တော့မယ်နော်..
မမဆူး ရွှေဝါးကစားရမရတော့မသိဘူး အဲဒီမျှစ်အပေါ်က အကြမ်းဖက်တွေက
မျှစ်ကိုပြုတ်ပြီးမှ ချက်ရတယ်လို့ဘဲ သိထားတာ…
အစိမ်းချက်တာ အရသာလေးလေးပင်ပင်နဲ့ ပိုစားလို့ကောင်းတယ် မအိရေ …
ဆူးရေ … ၀ါးပင်တိုင်း စားလို့ရမရတော့ သေချာမသိဘူး … လူကြီးသူမတွေကို အရင်မေးကြည့်ပါအုန်း ….
မမဝေ.. ကျမလည်းအဲဒီလိုချက်စားရတာကြိုက်လို့ချက်စားဖူးတယ်. မျှစ်ကိုတော့ ၂ခါလောက်ပြုတ်လိုက် တယ်.
စားချင်လိုက်တာ..။ သရေတောင် မနည်းထိန်းထားရတယ်..။
မမဝေရယ် ငရုပ်သီးအစိမ်းမှုန့်အစား ငရုပ်သီးစိမ်းလေးနဲ ချက်၇င်ပိုကောင်မလားလို့..။ ချာလုပ်တာ ဟုတ်ဘူးနော်..။ ရခိုင်တွေက ငရုပ်သီးစိမ်းကို ပိုကြိုက်တယ်လို့ထင်ပါတယ်..။ ဥပမာ- ကျွန်မ ဆိုရင် ငရုပ်သီးစ်ိမ်းပဲသုံးတယ်..။ တခြားသူတွေတော့ မပြောတတ်ပါ..။
ငရုတ်သီးစိမ်းတွေလဲ ထောင်းထည့်လိုက်လို့ အရမ်းကို စပ်သွားတယ် …
ရခိုင်တွေက ငရုတ်သီးအစိမ်းကို အရမ်းသုံးတတ်ပြီး ကျွန်မက အရောင်တင်မှုန့်ရဲ့အရောင်ကို သဘောကျတယ်ဆိုတော့ ၂ မျိုးလုံး ထည့်ပစ်လိုက်ပါတယ် …
ဒီပို့စ်နဲ့မဆိုင် .. စကားအတင်းစပ်ပြီး တစ်ခုလောက် အကြံတောင်းချင်တယ် …
သပြုသီးတစ်လုံး ၀ယ်ထားတာရှိတယ် … တစ်ခါမှ မချက်ဖူးလို့ ဘယ်လိုချက်စားရမှန်းမသိဖြစ်နေတယ် … ဘယ်လိုချက်ရင် အကောင်းဆုံးဖြစ်မလဲဆိုတာ သိချင်လို့ပါ …
” weiwei ” ကို အကြံပေးချင်ဇောနဲ့ အမြန်ရေးလိုက်တာ..
သပြုသီး ပိုစ့်ရဲ့ခေါင်းစဉ်မှာ
တချောင်းငင် ထည့်ပုံ နဲ့ 
နံပါတ်တပ်တာ မြန်မာနဲ့ eng နှစ်ခုဖြစ်သွားတယ်
မျှစ်ကို ဘယ်လိုချက်ချက်ကြိုက်ပြီးသားပဲ မဝေရေ..မဝေရဲ့နည်းအတိုင်းတော့ မချက်ဖူးသေးဘူး စမ်းချက်
ရခိုင်ချက်ဆိုရင် ငရုတ်သီးစိမ်းတွေ အဖတ်လိုက်မှ မပါရင်
ရခိုင်ချက် မမည်ဘူးဗျ ။
ဒါပေမဲ့  စားတာဘဲ ပြီးမှဆေးသောက်တာ
ကျုပ်လဲ အပေါ်က တစ်ယောက်ပြောတဲ့အတိုင်းပဲဗျို့ 
အိမ်ရှေ့က ၀ါးပင် ကို ကြည့်ပြီး မျက်စောင်း ထိုးလို့.. အမေ က ပြောတယ် စားလို့ ရချင်မှ ရမယ်တဲ့.. အဲဒါကြောင့် မဝေ ကို အဖော် စပ်နေတာ.. အိမ်က ၀ါးပင် အစို့တွေ မြင်ရင် အသည်းယားတယ် ဖဲ့ပြီး ချက်စားကြည့်ချင်နေတာ.. ဟိဟိ
မျှစ်ပေါက်ကိုချိုးပြီး အခွံခွာ၊ အလုံးလိုက်ပြုတ်လိုက်ရင် စားလို့ရတယ်။ ရေကိုသွန်လိုက်တော့ အနံ့ပြင်းပြင်းထွက် သွားတယ်။ မျှစ်ကိုနှစ်ရေသုံးရေ ပြုတ်ပြီးမှပဲ ပြန်ချက်ရင် စားလို့ပိုကောင်းပါတယ်။ ကြခတ်ဝါးတောင် အဲဒီနည်းနဲ့ စားခဲ့ဖူးပါတယ်။
မဝေရေ မျှစ်လှီးပုံလေး နမူနာယူသွားပါတယ်။ မျှစ်ကိုမပေါက်ဘဲ အကွင်းအကွင်းလှီးပြီး ချက်တော့ အမြင်ပိုလှနေတယ်နော်။